Kushambadzira Dhata: Iyo Kiyi yekumira kunze mu2021 uye Beyond | Martech Zone
Muzuva ranhasi nezera, hapana chikonzero chekusaziva kuti ndiani wekushambadzira zvigadzirwa zvako uye masevhisi kuna, uye izvo zvinoda vatengi vako. Nekuuya kwekushambadzira dhatabhesi uye humwe hunyanzvi-hunotungamirwa netekinoroji, aenda mazuva easina kukarirwa, asina kusarudzwa, uye akajairika kushambadzira.
Ipfupi Nhoroondo Yekutarisa
Pamberi pa1995, kushambadzira kwaiwanzoitwa kuburikidza netsamba uye kushambadzira. Mushure me1995, nekuuya kweemail tekinoroji, kushambadzira kwakave kwakanyatsojeka. Yakanga iri nekuuya kwemafoni efoni, kunyanya iyo iPhone muna 2007, kuti vanhu vatange kunyatsobatirira kune zvemukati, izvozvi zviri nyore kuwanikwa pane zvavo skrini. Mamwe mafoni emafoni akabatwa mumusika munguva pfupi yapfuura. Iyo smartphone yechimurenga yakabvumidza vanhu kutakura smart ruoko-rwakabata chishandiso kuenda kunenge chero kupi. Izvi zvakatungamira kune yakakosha mushandisi zvisarudzo dhata inogadzirwa yakatenderedza-iyo-wachi. Kuburitsa zvirimo zvinoenderana nekuzvishandira kune vanhu chaivo zvakatanga kuita yakakosha nzira yekutengesa kumabhizinesi, uye ichiri zvakadaro.
Kuuya ku2019 uye kutarisa pamusoro payo, tinoona kuti vashandisi vakanyanya kufamba pamwe nekuwedzera kuvimba pamidziyo yavo inobatwa nemaoko. Yekutengesa data nhasi inogona kutorwa pane ese nhanho yekutenga maitiro. Kune vashambadziri kuti vazive izvo zvavanoda vatengi vavo, ivo vanofanirwa kutanga vaziva kwekutarisa! Dhata inogona kupa ruzivo rwakakosha kune vangangoita vatengi 'enhau midhiya zviitiko, maitiro ekubhurawuza, kutenga pamhepo, nzira dzekudyara, marwadzo poindi, zvinoda maburi, uye mamwe metric akaomesesa. Rudzi urwu rwe data rekushambadzira richava musimboti wechero nzira inobhadharisa yekushambadzira.
Basic Maitiro Ekushambadzira Dhata Kuunganidzwa
Usaende usingaoni uchitora data! Iko kune isingakundike huwandu hweshambadziro dhata iripo kunze uko, uye iwe unonyanya kuda chete inoenderana chunk yacho. Kuunganidzwa kwedata kunofanirwa zvichienderana nemhando yebhizimusi rako uye nhanho iyo kambani yako inomira mune yekuvandudza kutenderera. Semuenzaniso, kana iwe uri wekutanga kuda kuvhura, saka unofanirwa kuunganidza dzakasiyana siyana dhata dzekutsvaga musika zvinangwa. Izvi zvinogona kusanganisira:
Target eboka email kero
Zvemagariro midhiya zvaunofarira
Nzira dzekubhadhara dzinosarudzwa
Makambani mune bhizinesi anogona kunge atove nedata rekushambadzira rambotaurwa. Zvakadaro, ivo vanogara vachida kuramba vachivandudza pane izvi zvikamu vachiri kuunganidza dhata yevatengi vatsva. Ivo zvakare vanofanirwa kutarisa mukutevera yakakosha mhinduro yevatengi uye kuwana ruzivo pane kukosha kwechigadzirwa chiripo kuburikidza nedata.
Pamusoro pezvo, kwekutanga, maSME, uye nzvimbo hombe, kuchengetedza zvinyorwa zvemarudzi ese ekutaurirana nevatengi kwakakosha. Izvi zvichavatendera kuti vagadzirise nzira inoshanda yekutaurirana nevatengi.
88% yevatengesi vanoshandisa data rakawanikwa nevechitatu mapato kusimudzira kwavo kwevatengi kusvika nekunzwisisa, nepo 45% yemabhizinesi vanoishandisa kuwana vatengi vatsva. Izvo zvakare zvakawanikwa kuti makambani anoshandisa dhata-inotungamirwa kumunhu inovandudza ma ROI avo pakushambadzira neashanu kusvika kasere nguva. Vashambadziri vakapfuura vavariro yavo yemari vaive vachishandisa matekiniki ehunyanzvi-akagoneswa ega ega 83% yenguva yacho.
Pasina shandi yekusahadzika, data rekushambadzira rakakosha mukusimudzira zvigadzirwa nemasevhisi kuvanhu vakarurama mu2020 nekupfuura.
Zvakanakira Kushambadzira Dhata
Ngatinzwisisei zvakadzama mabhenefiti ekushambadzira, ayo anotungamirwa nedata.
Inosarudzira Yekushambadzira Maitiro - Yekushambadzira data ndiyo pokutangira iyo inobvumidza vashambadziri kuti vagadzire nzira dzakanangana nekutengesa kuburikidza nehunyanzvi hwekutaurirana. Iine data rakanyatso kuongororwa, mabhizinesi anoziviswa zvirinani kuti ndedzipi nguva yekutumira mameseji ekutengesa. Kurongeka panguva yakakodzera kunobvumidza makambani kuunza mhinduro kubva kune vatengi, iyo inokurudzira kuita kwakanaka.
53% yevatengesi vanoti izvo zvinodiwa nevatengi-centric kutaurirana kwakakwira.
MediaMath, Global Ongororo yeData-Kushambadzira uye Kushambadzira
Kunonatsiridza Vatengi Zviitiko - Mabhizinesi anopa vatengi ruzivo rwakakosha kwavari anomira mumutambo wavo. Nei uchisimudzira nesimba mota yemitambo kumutengi wemakore-makumi manomwe nemashanu? Kushambadzira data-inotungamirwa mishandirapamwe inoitirwa kune zvakanangana nevatengi zvinodiwa. Izvi zvinowedzera ruzivo rwevatengi. Kushambadzira, kusvika padanho rakakura, uchiri mutambo wevaenzi, uye kushambadzira data rinotendera mabhizinesi kuita emhando yepamusoro ekufungidzira. Dhata-inotungamirwa kushambadzira inogona kupa yakaenzana ruzivo kune ese vatengi mutero. Iyo inobvumidza iyo Omnichannel yemarudzi kugadzirwa uko kunyangwe iwe ukavabata navo kuburikidza nevezvenhau vezvenhau, kushamwaridzana kwehukama, kana kuburikidza nefoni, vatengi vanogamuchira iwo akafanana akakodzera zvidimbu zveruzivo uye vanowana zvakafanana kushambadzira zviitiko kune ese mageru.
Inobatsira Kuziva Yakakodzera Engagement Channel - Yekushambadzira-inofambiswa nesimba inobvumidza makambani kuona iyo yekushambadzira chiteshi inoita zvakanakisa kune chakapihwa chigadzirwa kana sevhisi. Kune vamwe vatengi, kutaurirana kwechigadzirwa kuburikidza nesocial media chiteshi kunogona kumutsa iyo yaunoda mushandisi kubatanidzwa uye maitiro. Kutungamira kunogadzirwa kuburikidza neFacebook kunogona kupindura zvakasiyana nezvakatungamira zvinogadzirwa kuburikidza neGoogle Ratidza Network (GDN). Yekushambadzira data inobvumidzawo mabhizinesi kuona kuti ndeapi mafomati anoshanda zvakanyanya pane yakatarwa yekushambadzira chiteshi, ingave ipfupi kopi, infographics, blog zvinyorwa, zvinyorwa, kana mavhidhiyo.
Inonatsiridza Hupenyu Hwemukati - Dhata nyowani inoramba ichitsvaga kubva kune vatengi vezvinangwa zuva nezuva, uye vashambadziri vanofanira kunyatsoiongorora. Yekushambadzira data inozivisa mabhizinesi kuti aite zviri nani kana kugadzirisa marongero avo ekare-ekushambadzira anoenderana nezvinogara zvichichinja zvevatengi vavo. Sekutaura kwaSteve Jobs, "Unofanira kutanga neruzivo rwevatengi uye nekushanda kumashure tekinoroji. Haugone kutanga nehunyanzvi uye edza kuona kuti urikutengesa kupi ". Nokunzwisisa zvinoda kushandiswa nevashandisi zvirinani, kwete chete kuti makambani achabatanidza vatengi vatsva asiwo achachengetedza ekare. Zvemukati zvemhando zvakakosha kune vese vatengi kutenga uye kuchengetedza vatengi.
Iwe unofanirwa kutanga neruzivo rwevatengi uye shandira kumashure kune tekinoroji. Iwe haugone kutanga nehunyanzvi uye edza kufunga kuti uchaenda kunoitengesa kupi.
Inobatsira Chengeta Ziso Pamakwikwi - Yekushambadzira data inogona zvakare kushandiswa kucherechedza uye kuongorora ako makwikwi ekutengesa nzira. Mabhizinesi anogona kuona zvikamu zve data rakadzidzwa nevakwikwidzi uye kufungidzira mafambiro avanosarudza kushambadzira zvigadzirwa zvavo. Kambani inoshandisa data kudzidza vakwikwidzi vayo inogona kusarudza kushandisa counter-zano rinozovatendera kuti vabude pamusoro. Uchishandisa data kudzidza vakwikwidzi zvakare inobvumidza mabhizinesi kuvandudza avo azvino ekushambadzira maitiro uye kuti vasaite iwo iwo akafanana zvikanganiso izvo zvakaitwa nevanokwikwidza navo.
Chinja Insights kuita Zviito
Yekushambadzira data inopa zviito zvinoitika. Kuti uvandudze mishambadziro yekushambadzira, iwe unofanirwa kuziva zvakawanda sezvaunogona nezve vatengi vako. Yakadzama kutarisisa ndiyo kiyi yekubudirira mumakore anotevera. Kuita mhinduro dzinotungamirwa nedhata dzinogona kuchinja zvachose nzira yaunoita bhizinesi. Hazvina mhosva kuti mushambadzi akangwara zvakadii, ivo havagone kuita zvishamiso chete pane anovhima. Ivo vanofanirwa kupihwa simba kuburikidza nekuteterera kwedata rekushambadzira kwemhedzisiro mhedzisiro.
Tags: business2communitykukwikwidza kutsvagisazvemukati zvemukativatengi vanozivanzira dzekubatanidzwakushambadzira chiteshidata rekushambadziraPersonalizationtarisazvaunofarira mushandisi